Kusoo dhawaaw bogga hay’adda gaadidka adigan doonaya in uu qaato leeysinka Swidhiska. Halkan waxa aad ka helaysaa dhamaan warbixinadda aad u baahan tahay ka hor inta aadan wax isbarin oo aadan qaadanin leeysinka.
Imtixaano noocee ah ayaa lasameen karaa xiligaan?
Wixii ka billowda 24 November ilaa iyo 31-December weey adagtahay inaad hesho waqti tioriika B-körkorka.
Lakiin hadada sameeyneyso sida Lastbil,Buss,Lokförare ,ADR, certifieringsprov,Yreksesprov wad xiran kartaa.
Wixii kadanbeeyo 31 December sida caadi ah waad xiran kartaa tioriika iyo imtixaanka darawalnimada.
Maxaan sameenayaa hadanan ku baasin tioriika oo aysan jirin waqti kale oo aan bokeysan karo tioriika?
Haduu kuu xiranyahay wadida gaariga waxaad ubaahantahay inaad iska kansasho sababto ah marka hore waad inaad ku baasta tioriika.
Maxaa dhacaya haddii aan ku dhaco imtixaankeyga aragtida oo markaa awoodi kari waayo inaan ballansado imtixaan cusub ka hor inta aanan qaadin imtixaanka wadista?
Haddii aad leedahay tijaabo wadista baabuurta ah waxaad u baahan tahay inaad kansasho maaddaama lagaa doonayo inaad yeelato tijaabo aragtida la oggolaaday kahor intaadan qaadan imtixaanka wadista. Haddii aad baajiso baaritaankaaga ugu yaraan 24 saacadood kahor waqtiga uu bilaabayo, khidmadda imtixaanka si otomaatig ah ayaa loo soo celin doonaa.
Hadii aad imtixaanka tioriiga aad ku baastay 1 bisha mars 2020 iyo inta u dhaxeeyso bisha september 30 2021 waxaa u shaqeenayaa 6 bilood.
Wixii kadanbeeya 30 bisha september 2021 wa sida caadiga ah 4 billood.
Wadada leeysinka ee Swedhisha waxa loo kala qaybin karaa sagaal talaabo oo kala duwan
Halkan waxa aad ka aqrisan kartaa waxa loola jeedo dhamaan talaabooyinkaas
Warbixin ku socoto adigan qaadanaya laysinka Swedhishka.
Kuwani waa todobo warbixinood oo qusaysa adigan qaadan doona laysinka Swedhishka.
Imtixaanka leeysinka waxa uu ka kooban yahay laba imtixaan
Si aad u qaadato leeysinka waa waajib in aad samayso imtixaan aqooneed iyo imtixaan wadista ah.
Imtixaan aqooneed la waafajiyey
Waxa kale oo aad dalban kartaa in aad imtixaanka ka samaysid Afka, oo ay la socoto waqti imtixaan oo dheer, turjume ama uu la socdo turjume luqada tilmaamaha ah.
U Balanso waqti imtixaanka
Balanata waad baajin kartaa ama dib u balansan kartaa imtixaankaada adiga oo galaya adeega imtixaan balanso.
Leeysinka wadamada kale ee gudaha Swedhen
Halkan waxa aad ka helaysaa jawaabaha qaar kamid ah su’aalaha caadiga ah ee ku saabsan ku wadista leeysinka wadamada kale gudaha Swiidhen iyo goorta aad samaysan karayso leeysinka Swdhishka.
Ku saabsan Hay’adda Gaadiidka
Information in English about driving licence
174 av 193 (90 %) läsare har svarat att de har haft nytta av informationen